Banyere Style Rave shop - Nkwụsị gị nke mbụ maka uwe eji ewu ewu & akwa
Dabere na New York, e mepụtara ụlọ ahịa Style Rave n'ihi mmasị ndị na-eso ụzọ Instagram anyị, bụ ndị na-ajụ mgbe niile gbasara ebe anyị ga-esi zụlite ihe nkiri ahụ.
N ’ihe ngosi ọ bụla nke eji ejiji dị mma, ọ nwere onye na-akpa ike ma ọ bụ abụọ n’ebe ọrụ. Na Style Rave, anyị kwenyere na ị bụ kpakpando ahụ ma anyị bụ onye na - ahụ maka dijitalụ gị. Anyị kwenyekwara na iji ejiji bụ ụdị kacha egosipụta enweghị egosipụta onwe onye. Yabụ, anyị ji nlezianya dozie iberibe ụdị ejiji na-enyere gị aka iru ogo Raven anya na-enweghị ike. Chee echiche iberibe edoziri nke chọrọ obere mbọ n’aka gị site n’iche na ntụkwasị obi siri ike.
Na Style Rave, anyị kwenyere n'inwe obi ike na ịchụso ihe na-etinye mkpụrụ obi gị n'ọkụ. Yabụ, kedu ụzọ ka mma isi ejide onwe gị maka ịchụso agụụ ihe gị karịa ịgaghị iberibe agwa ndị na-agwa ụwa onye ị bụ [onye na-aga gota] na-enweghị ikwuwa okwu.
Ile anya dị ịtụnanya abụghị otu nha; ya mere anyi n’acho inye anyi otutu uzo. Nchịkọta anyị na-egosipụta mkpebi siri ike anyị iji iji ejiji dịka ihe eji eme ka ihe ọ bụla enwetacha. Ebe ọ bụ na ọ dịghị ụdị Ravens abụọ yiri, yabụ anyị na-eme ike anyị iji nabata uto nke ụdị Ravens anyị nwere nghọta. Site na akwa nke oge a rue mbadamba oge, ihe ejiji na-eyi oge a ma na-eyi oriri, uwe egwuregwu nke oge a ruo n'ahịa azụmaahịa, ị nwere ike ịtụ anya ịchọta akụkụ dị mma nke na-egosipụta akụkụ dị iche iche nke ndụ gị ma na-adịgide ruo ọtụtụ oge.
N’ikpeazụ, anyị chọrọ ka ndị ahịa anyị nwee ntụrụndụ! Nlele anya na ngwa, jiri agba di egwu ka ị na - achọpụta ezigbo echiche ụdị gị!
Lọ ahịa anya ị hụrụ n'anya!
Kpọtụrụ anyị na + 1.516.806.0803 ma ọ bụ Email: shop@stylerave.com
Iji mụta gbasara Iwu Iwu Ndị Ahịa anyị, pịa ebe a
Iji hụ azịza nke Ajụjụ na Mbupu Anyị, pịa ebe a
Site na mmekorita anyi na weCare Africa, pasent nke usoro gị ga-enyere gị aka inweta ego mmuta nke ụmụaka n'ime ime obodo na-akwadoghị nke Africa.